Muuri News Network » Sawirro: C/weli Gaas oo maanta Xariga ka jaray Suuq Weyn oo laga dhisay…
Sawirro: C/weli Gaas oo maanta Xariga ka jaray Suuq Weyn oo laga dhisay…
Madaxweynaha Puntland Dr.Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa maanta oo Arbaca ah xarigga ka jaray suuq weyn oo laga hirgeliyey Xero dayax magaalada Gaalkacyo suuqaas oo ka kooban 17 dhisme oo isu jira kow iyo toban bakhaar oo waaweyn oo midkiiba ku fadhiyo 8X10-mitir ,iyo lix hool ama firsho oo waaweyn kana kooban 15X24-mitir kuwaas oo loogu tala galay midkiiba inay ku ganacsadaan, dad gaaraya 400 oo qof.
Madaxweynaha Puntland Dr.Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa sidoo kale kormeeray mashaariicdii horumarineed ee dawladdu kafulisey magaalada Gaalkacyo sida Madaxtooyada Puntland ee Gaalkacyo oo dhismeheedi weli socdo, dhismaha Wasaaradda Hawlaha Guud oo geba-gebo ah, Dhismaha Wasaaradda Kalluumaysiga, Hay’adda Waddooyinka iyo dhismaha Maktabadda oo iyaguna meel wanaagsan maraya.
Madaxweynaha Puntland Dr.Cabdiweli Maxamed Cali oo ay weheliyaan, Maamulka Gobolka Mudug iyo kan Degmada Gaalkacyo, Wasiiro iyo xildhibaano ayaa kormeerkaasi kadib Shir Jaraa’id saxaafadda ugu qabtay Qasriga uu madaxweynaha Puntland ka degganyahay Magaalada Gaalkacyo.
Dr. Gaas ayaa ugu horrayn uga mahadceliyey Guddiyadii kala duwanaa ee uu u magcaabay horumarinta Gaalkacyo shaqooyinka muhimka ah ee ay ka fuliyeen magaalada gaar ahaa guddiga soo celinta bilicda gaalkacyo oo shaqooyin waaweeyn ka qabtay magaalada Gaalkacyo.
Sidookale Madaxweynaha Puntland ayaa wax lagu farxo ku tilmaamay inay Gaalkacyo maanta yeelatay suuq weyn oo qofka raba inuu ka adeegto uu hal-mar waxa uu ubaahanyahay kawada helayo iyadoo wax waqti ah oo kalumay aanu jirin taasina ay tahay horumar lagu faani karo oo u soo hoydey shacabka kudhaqan magaalada Gaalkacyo.
Madaxweynaha Puntland Dr.Cabdiweli Maxamed Cali ayaa ku tilmaamay shaqooyinkii Gaalkacyo laga qabtay inay ahaayeen shaqooyin aad u dhib badnaa dadkuna marka hore aanay jeclayn horumarka balse ay hadhow ay siweyn usoo dhoweeyaan markay isbedelka arkaan.
“Dadkii shalay habaaramayey oo dagaalamayey weeye kuwa maanta ducaynaya, markay arkeen isbedelka muuqda, marka dadka in wanaagga la tuso, caddaaladda la tuso, horumarkana lagu jihooyo wax wanaagsan weeyaan dadkuna marka dambe way laqabsanayaan” ayuu yiri madaxweyne Gaas.
Madaxweynaha Puntland Dr.Cabdiweli Maxamed Cali ayaa geba-gebadii hadalkiisa shacabka Puntland meelkasta oo ay joogaan ugu baaqay inay kaqayb qaataan horumarka Puntland waxaana uu intaa ku daray shaqooyinkii Gaalkacyo laga qabtay in aanay ku ekayn Gaalkacyo oo keliya balse dhammaan Gobollada Puntland shaqooyinkaasi laga wada qaban doono iyadoo lookala horumarin doono hadba sida ay ukala dhib badan yihiin.